Dote Kyi Mg: New Lovely Gril
Dote Kyi Mg
New Lovely Gril
Posted by Dote Kyi Mg at 9:36 AM
Simba September 16, 2012 at 7:38 PM
အထက်ပါပုံများသည် Facebook မှ Download လုပ်ပီး
ပိုင်ရှင်ခွင့်ပြုချက်မရရှိပဲ လာတင်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍
နှမချင်းစာနာသောအားဖြင့် ပြန်ဖျက်ပေးရန်လေးစားစွာ တောင်းပန်
အပ်ပါသည်။ ရိုးရိုးသားသားအလုပ်လုပ်နေသော အထက်ပါမိန်းကလေး
အား ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းစေခြင်း အထင်မြင်လွဲမှားစေနိုင်သောကြောင့်
ပြန်ဖျက်ပေးရန် ထပ်မံ၍လေးစားစွာတောင်းပန်အပ်ပါသည်။ .....
ပဲခူးသား ကျော်မြတ် January 19, 2013 at 8:56 AM
ဒီစော်လား ရိုးရိုးသားသား လုပ်ကိုင်စားနေတာ
ဖုန်းနံပါတ်ယူသွား ၉၇၁၂၄၄၃၄. Yishun မှာနေတယ် Honeywell မှာလုပ်တယ် အရင်က
ဒိုင်လျှိူလေးတွေ လိုက်တယ်လေ ဈေးလား ပေါပါတယ် ညစာကျွေး ရုပ်ရှင်ပြ စကပ်တစ်ထည်လောက် ၀ယ်ပေးလိုက်ရင် တစ်ညလုံး ဆွဲပါလေ့
နောက်တစ်ခေါက်ဆို အလကားပဲ မိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ်တဲ့
လုပ်လို့ တော့ မကောင်းဘူး အရိုးချည်းပဲ နို့ တော့ တော်တော် ကြီးတယ်.
alin nyilin February 20, 2013 at 6:32 AM
ကိုပဲခူးသားကျော်မြတ်ရေ အစ်ကို့ရဲ့ မဟုတ်တဲ့ကွန်မန့်ကြောင့် တစ်ပါးသူ အရမ်းစိတ်ဆင်းရဲနေရတယ်ဆိုတာ သိရင် အစ်ကိုလဲ စိတ်ထဲတော့ ကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး အစ်ကို့မေးလ်ထဲလဲ ကွန်မန့်တွေစာတွေ ၀င်နေမှာပါ ကျေးဇူးပြုပြီး ဒီ link လေးပြန်ဝင် reply ဘေးက delete နှိပ်ပြီး ကွန်မန့်ကလေး ဖျက်ပေးစေလိုပါတယ် .. ကိုယ်မှားမှန်းသိလို့ အမှန်ပြင်နိုင်ရင်လဲ လူတော်ပါပဲဗျာ .. အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါတယ် ပြန်ဖျက်ပေးပါ
htut khaung soe January 19, 2013 at 9:00 AM
aww....... thu lar
ma kyite par bu
phin lel ma shi bu.
lee taung ma taung lo pyan khaing lite ya tel.
alin nyilin February 20, 2013 at 6:33 AM
ကို htut khaung soe အစ်ကို့ရဲ့ မဟုတ်တဲ့ကွန်မန့်ကြောင့် တစ်ပါးသူ အရမ်းစိတ်ဆင်းရဲနေရတယ်ဆိုတာ သိရင် အစ်ကိုလဲ စိတ်ထဲတော့ ကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး အစ်ကို့မေးလ်ထဲလဲ ကွန်မန့်တွေစာတွေ ၀င်နေမှာပါ ကျေးဇူးပြုပြီး ဒီ link လေးပြန်ဝင် reply ဘေးက delete နှိပ်ပြီး ကွန်မန့်ကလေး ဖျက်ပေးစေလိုပါတယ် .. ကိုယ်မှားမှန်းသိလို့ အမှန်ပြင်နိုင်ရင်လဲ လူတော်ပါပဲဗျာ .. အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါတယ် ပြန်ဖျက်ပေးပါ
Simba February 17, 2013 at 12:10 AM
မင်းတို့မှာနှမမရှိဘူးလား ... နှမမရှိတောင် အမေတော့ရှိမှာပါ ပဲခူးသားကျော်မြတ် .... မင်းမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုကိုယ်နဲ့မသိ ပဲနဲ့အဲ့လိုပြောတာစောက်ရှက်မရှိဘူးလား ငါ့နာမည်၇န်နိုင် မင်းကြိုက်တဲ့ နေ၇ာမှာကြိုက်သလိုရှင်းလို့၇တ၇် ဒါငါ့သူငယ်ချင်း .... ငါ့ဖုံနံပါတ် ယူထားအုံး 83000162 စလုံးမှာနေတ၇် Facebook ထဲက Data တွေနဲ့ ဘယ်မှာနေတ၇် ဘယ်မှာလုပ်တ၇်ဆိုတာ လာမေ၇းနဲ့
ဖုံးနံပါတ်လဲမှားနေတ၇် ငါပြောတာရှင်းတ၇်နော် ကျော်မြတ် မင်းမကျေနပ်၇င်ငါ့ကိုလာရှင်းလို့၇တ၇်
မြန်မာပြည်မှာဆိုလဲ ၇န်ကုန်မှာလာရှင်းလို့၇တ၇် ၇န်ကင်းသား ကျောက်ကုန်းမှာနေတ၇် .....
Htut Khaung Soe >>>>>> မင်းအမေကိုအ၇င်ပြန်ခိုင်းလိုက် ဟုတ်ပီလား .....
alin nyilin February 17, 2013 at 4:02 AM
သူကကျနော့သူငယ်ချင်းပါလုံးဝကိုရိုးရိုးသားသား ဆိုတာ ဘုရားအဆူဆူရှေ့မှာကျိန်တွယ်ဝံပါတယ် ကျေးဇူးပြုပြီး ဒီပုံတွေကို အမြန်ဆုံးပြန်ဖျက်ပေးပါရန်အနူးအညွတ်တောင်းပန်
ပါတယ် ရေးထားတဲ့ကွန်မန့်နှစ်ခု ပဲခူးသားကျော်မြတ်နဲ့htut kaung soe တော်တော့ကို မိုက်ရိုင်းပါတယ် ဒီကွန်မန့်တွေကိုလဲ အမြန်ဆုံးဖျက်ပေးပါ .. ပုံတွေကို အမြန်ဆုံးပြန်ဖျက်ပေးပါရန် ထပ်ဆင့် အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါတယ် နှမချင်းစာနာစိတ်ကလေးများထားကြပါ တဖက်သားမှာတော်
alin nyilin February 17, 2013 at 11:50 PM
ဒီဘလော့ပိုင်ရှင် ဘလော့ဂါကို ဆက်သွယ်လို့ရမယ့်မေးလ်လိပ်စာလေးများ ရနိုင်မလားမသိဘူးဗျာ... အမြန်ဆုံးဖျက်ပေးစေချင်ပါတယ် ဒီပုံတွေကို
alin nyilin February 18, 2013 at 6:27 AM
alin nyilin February 18, 2013 at 8:52 AM
plz delete photo
Mikko Gyi February 18, 2013 at 4:49 PM
အပေါ်က ကို alin နဲ့ ကို၇န်နိုင်တို့ပြောတာအမှန်တွေပါ
ဒီသူငယ်ချင်းက အပြင်မှာခင်တာလဲကြာပီ မိကောင်းဖခင် သားသမီးပါ
မိဘကိုလုပ်ကျွေးနေတာပါ သတင်းကြားလို့ လာကြည့်တော့
မဟုတ်တာမမှန်တာပြောတဲ့ ပဲခူးသားကျော်မြတ်နဲ့ htut khaung soe
တို့၂ယောက် ဒီကိစ္စတွေမမှန်ဘူးဆိုတာ ပြန်ဖြေရှင်းပေးပါ နှမသားချင်းစာ
နာစွာ ဒီဘလော့ပိုင်ရှင်ကိုလဲတောင်းပန်ပါတ၇် ဒီပုံတွေကိုပြန်ဖျက်ပေးပါ
တ၇် ထပ်ပြီးတော့တောင်းပန်ပါတ၇် ဒီဘလော့ပိုင်ရှင် ဒီပုံတွေ့ပြန်ဖျက်ပေးပါလို့
ဟော့ဟော့၇မ်း၇မ်းနေတဲ့ အနုပညာရှင်တွေ မော်ဒယ်တွေ မကောင်းတာလုပ်စားတဲ့
မိန်းကလေးတွေပဲတင်ပါဗျာ မျိုးကောင်းသားသမီးတွေကိုတော့ အဲ့ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ဗျာ
May Hnin February 18, 2013 at 7:52 PM
ပါကျေးဇူးပြုပြီးပြန်ဖျက်ပေးပါ အပေါ်က ပဲခူးသား ကျော်မြတ်နဲ့
htut khaung soe ရှင်တို့ယောက်ကျားတန်မဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို
Myowinthant mw February 18, 2013 at 10:27 PM
သူက ငယ်ငယ်ကတည်းကကျောင်းနေဖက်သူငယ်ချင်းပါ ခုထိလဲအလုပ်တူတူလုပ်နေကြတဲ့သူငယ်ချင်း သူ့ရဲ့ရိုးသားမှုနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ကျနော့ အသက်ထက်တောင် အာမခံနိုင်ပါသေးတယ် ကျေးဇူးပြုပြီး ဒီပုံတွေ အမြန်ဆုံးပြန်ဖျက်ပေးပါ ရိုးရိုးသားသား မိဘကို အလုပ်အကျွေးပြုနေတဲ့ မိကောင်းဖခင်သားသမီးး စိတ်ဒဏ်ရာရမရစေချင်ပါဘူးဗျာ ဘလော့ပိုင်ရိုင် ဘလော့ဂါလဲ ဒီလို ဖြစ်စေချင်မှာမဟုတ်ပါဘူးး မသိလို့ သူများပို့လိုက်လို့ တင်လိုက်တယ်လို့ထင်ပါတယ် ကျေးဇူးပြုပြီး အမြန်ဆုံးပြန်ဖျက်ပေးပါရန် အနူးအညွတ် ထပ်ဆင့်တောင်းပန်ပါတယ် (ဇော်ဇော်အောင် )
ချစ် ဦး February 15, 2014 at 10:50 AM
ပုံကြည့်ရတာတော့ မိန်းကလေးကဒီလိုအစားမျိုးထဲပါမယ်မထင်ပါဘူး ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရမကျေနပ်မှုကြောင့်နာမည်ဖျက်လိုသော စိတ်ဖြင့်နှမချင်းမစာနာမလုပ်ပါနဲ့အမြန်ဆုံးပြန်ဖျက်ပေးလိုက်ပါ သင်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာဆိုရင်ပေါ့ တနှာကိလေသာကိုလူအများစုနှစ်သက်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ မဟုတ်မဟက်ပဲ နာမည်ဖျက်တာမျိုးတော့မဖြစ်စေချင်ဘူး အခြားသော အောကားတွေ ပုံတွေတင်ပေးတာတော့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် တကယ်အပျက်မမဟုတ်ပဲ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရနာမည်ဖျက်တာမျိုးမဖြစ်စေချင်ပါဘူး
eitun win August 14, 2015 at 10:33 AM
လူမှန်ရင် ဒီပုံတွေကိုဖျက်ပေးတာကြာပေါ့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ကလူတိုင်းမှာမရှိဘူး လူလူချင်းဘယ်တူမလဲ အရသာချင်းလည်းမတူဘူးလေ ဘလော့ဂါက ယောက်ကျားလား ဒါမှမဟုတ်
Hot Girl Name Thet Su Zin
Model Aww Seng
LovelY Girl Shwe Zin
Ei Chit 2
Ei Chit New Hot Models
New Face Model ..... Snow Queen
Cute MM Girl
Korea T-ara - Roly Poly